Warar Dheeraada – Geeska Afrika Newspaper | Hargeisa, Somaliland
Archive for the ‘Warar Dheeraada’ Category:
Madaarka Cigaal: Qardo-Jeexa Wasiir Cali-Mareexaan Iyo Doodda Wasiirka Duulista
Published on Aug 26 2017 // Warar, Warar Dheeraada
Hargeysa(Geeska)-Wasiirka wasaarada duulista iyo hawada Somaliland Farxaan Aadn Haybe ayaa si faahfaahsan uga hadlay dhacdada haweenay reer Somaliland ah lagaga soo reebay diyaarada Fly Dubai oo ay la socotay. Waxa uu wasiirku sheegay in haweenaydaasi ay ku dhex dagaalantay diyaarada isla markaasna...
Wasiirka Cadaaladda Oo Shacabka Uga Digay Ammaanta Xadka Ka Baxsan Ee Madaxweynaha Iyo Madaxda Xisbiyada
Hargeysa(Geeska)-Wasiirka cadaaladda Axmed Faarax Cadare, ayaa dadka uga digay amaanta xadka ka baxsan ee lagula dul dhaco madaxda dalka gaar ahaan madaxweynaha iyo guddoomiyayaasha xisbiyada. Wasiir Cadare, oo hadal ka jeediyay munaasibad loo qabtay dhallinyaro shalay ku biirtay xisbiga KULMIYE, wuxuu...
Hargeysa(Geeska)-Shan wasiir daakhili oo isaga dambeeyay xilka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland ayaa maanta isugu tagaya xisbiga mucaaradka ah ee Waddani oo ay wakhtiyo kala duwan ku biireen. Shanta Wasiir arrimo gudeed ee soo maray Somaliland badankooduna xilka isku wareejiyeen ayaa si rasmi...
Madaxweyne Siilaanyo Oo La Sheegay Inuu Galay Qaliin Fudud Oo Caafimaad Oo Lagu Guulaystay
Published on Aug 22 2017 // Warar, Warar Dheeraada
Abu-dhabi(Geeska)-Madaxweyne Axmed Maxamed Silaanyo, ayaa la sheegay inuu toddobaadkan qaliin fudud oo qabsin lagaga sameeyay ku galay magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta oo uu Jimcihii tagay. Ma jiro war rasmi ah oo ay madaxtooyada Somaliland ka soo saartay hawlgalka caafimaad ee Madaxweyne...
Wasaarada Waxbarashada JSL Oo 7 Dugsi Sare Kala Noqotay Ruqsadii + Liiska Magacyadooda
Published on Aug 21 2017 // Warar, Warar Dheeraada
Wasaarada Waxbarashada JSL ayaa 7 Dugsi Sare Kala Noqotay Ruqsadii ay ku shaqaysanayeen, sidoo kalena wxay shaaciyeen liiska dugsiyadaasi iyo sababta keentay….WARKAN OO DHAMAYSTIRAN HALKAN KA DAAWO